मेसिनले कपाल काट्नु हुन्छ होसियार ! « Janata Samachar
मेसिनले कपाल काट्नु हुन्छ होसियार !
प्रकाशित मिति :4October, 2018 7:20 am
काठमाडौं । कपाल काट्ने मेसिन बजारमा छ्यापछ्यापती भेटिन्छन् । सैलुनहरुले पनि सहजताका लागि सबैका कपालमा मेसिन प्रयोग गर्ने गर्दछन् । तर, त्यसको दिर्घकालिन असरका बारेमा हामी अनविज्ञ छौ । वैज्ञानिकहरुका अनुसार यस्ता मेसिन टाउकोमा प्रयोग गर्दा हाम्रो मष्तिकलाई ठूलो असर पर्दछ । त्यतिबेला आनन्द महसुस भएपनि यसले दिर्घकालिन रुपमा असर पु¥याएको हुन्छ । विद्युतिय सामाग्री हामी प्रयोग गर्नु त्यति राम्रो मानिदैन त्यो त करेन्टसँगै हाम्रो टाउकोमा लगाइएको हुन्छ ।
बर्षमा कति नेपालीले काट्छन दाह्री र कपाल ?
दैनिक लाखौं नेपालीले दाह्री काट्छन् र सोही मात्रामा कपाल पनि । त्यही दाह्री कपाल काट्ने मेसिनका लागि करोडौं रुपैंयाँ विदेशीने गरेको छ । नेपालीले ४६ लाख ४७ हजार रुपैंयाँ बराबरका २६ लाख २९ हजार व्लेड प्रयोग गरेका छन् । सात करोड ६ लाख रुपैंयाँ बराबरको २६ लाख वटा रेजर प्रयोग गरेका छन् भने ६८ करोड ४६ लाख ६२ हजार एक सय ३६ रुपैंयाँ बराबरको सेफ्टी रेजर ब्लेड प्रयोग गरेका छन् ।
गत बर्षको आँकडामा व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार एक लाख १५ हजार ३ सय ५५ रुपैंयाँ मुल्य बराबरका रेजर तथा ब्लेडका पार्टपुर्जा आयात गरिएको छ । नेपालले कपाल काट्ने कैँची मात्रै २ करोड ४३ लाख ७४ हजार एक सय ४७ रुपैंयाँ बराबरको आयात गरेको छ । सो रकमबाट २० लाख ५७ हजार ७ सय ९५ वटा कैचीँ आयात गरेको छ ।
नेपालले चीन, भारत, अमेरिका, बेलायत, युएइ, पाकिस्तान, बंगलादेश, जर्मनी, फ्रान्स, मेक्सिको, भियतनाम, रसिया, दक्षिण कोरिया, पोल्याण्ड, चेक रिपब्लिक, ताइवान, नेदरल्याण्ड, मलेसिया, ग्रीस लगायतका २४ देशबाट दारी तथा कपाल काट्ने समान आयात गर्दै आएको छ ।
काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा आज शेयरको मूल्यमा सामान्य अङ्कले वृद्धि भएको छ । नेपाल स्टक
हेटौँडा । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगलाई
शेयर कारोबारमा सुधार आउने संकेत
काठमाडौं । शेयर कारोबारमा सुधार आउने संकेत देखिएको छ । कारोबार मापक नेप्से परिसूचक ०दशमलव०८ विन्दुले
‘मुआब्जा समस्या समाधान गरी द्रुतमार्ग अघि बढ्छ’